सवारी एसेम्बल गर्नेलाई सरकारले छुट दिने
As of Fri, 19 Jul, 2019 22:40
बुधवार, भदौ २७, २०७५
काठमाडौं-अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न सवारीसाधन एसेम्ब्लिङमा लाग्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका छन् । नाडा अटो शो २०१८ कोे उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले व्यापार घाटा बढाउन अटोमोबाइल क्षेत्रको भूमिका बढी देखिएको भन्दै त्यसलाई कम गर्न उत्पादनतर्फ केन्द्रित हुन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका हुन् ।
व्यवसायीले एसेम्बल गर्न चाहेमा के कस्तो सुविधा आवश्यक पर्छ सरकार त्यसमा आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको अर्थमन्त्री डा खतिवडाको भनाइ छ । “अहिले सरकारले आयात नियन्त्रण गर्न सवारीसाधनमा कर बढाएको हो,” उनले भने, “व्यवसायीहरू उत्पादनतर्फ केन्द्रित हुनुस् भन्ने सरकारले चाहेको छ ।” राजस्वमुखी अर्थतन्त्रबाट अत्पादनमुखि अर्थतन्त्र बनाउनेतर्फ यो सरकार लाग्ने उनको भनाइ छ ।
“सडक बनाउन राजस्व चाहियो, राजस्वको आधार ठूलो हुनुप¥यो,” डा. खतिवडाले भने, “सरकारले यसैकारण राजस्व बढाएको हो ।” कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले बैंकको कर्जामा कडाइ हुँदा गाडीको बिक्रीमा कमी आएको गुनासो गर्दा अर्थमन्त्री खतिवडाले बैंकिङ क्षेत्रबाट हुने कर्जा प्रणालीमा आवश्यकताअनुसार खुकुलो र कडा नीति लिइने गरिएको उल्लेख गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले देशमा अर्थतन्त्र बुझेको अर्थमन्त्री आएको भन्दै खुसियाली मनाउँदै गर्दा अपेक्षाअनुसार काम नभएको उल्लेख गरिन् । “अर्थमन्त्री ज्यूले हामीले नभनीकन बुझ्नुहुन्छ, हामीले केही भनिरहनु पर्दैन भन्ने लागेको थियो तर हामीले धेरै नै अपेक्षा गरेका रहेछौं । ६ महिनासम्म केही संकेत देखिएको छैन,” उनले भनिन् ।
देशको व्यापारघाटा बढ्यो भनिरहँदा सरकारले अटोमोबाइलको विकास तथा स्वदेशमै निर्माणको लागि केही सहुलियत दिनुपर्ने उनले बताइन् । विश्वभर विद्युतीय सवारी बढेको उल्लेख गर्दै राणाले भनिन्, “विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने हो भने पनि धेरै नै व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्छ ।”
कार्यक्रममा नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद दाहालले सरकारले अटो मोवाइलमा अत्याधिक कर बढाउदा यस वर्ष १.५ प्रतिशतले बिक्री घटेको बताए । सवारीसाधनलाई बिलासीभन्दा आवश्यकताको रूपमा हेरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नाडाको आयोजनामा अटो शोको १३ औं संस्करण मंगलबारबाट सुरु भएको छ । नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन् अफ नेपाल र ग्लोवल एक्सपोजिसन एण्ड म्यानेजमेन्ट सर्भिसेजको संयुक्त आयोजनामा सुरु भएको नाडा अटो शो २०१८ को शीर्ष प्रायोजक सर्भो लुब्रिकेन्ट्स रहेको छ ।
भदौ ३१ गतेसम्म चल्ने मेलामा १९ वटा ब्राण्डका ४ पांग्रे तथा २० वटा ब्राण्डका २ पांग्रे सवारीसाधनहरू प्रदर्शनिमा राखिएका छन् । अटो शोमा यस वर्ष ७१ कम्पनीहरूको सहभागिता रहेको र १ सय ३४ वटा स्टल रहनेछन् । यो वर्षको अटो शो ६५ हजारले अवलोकन गर्न अनुमान गरिएको छ ।
गर्मीमा कारको सुरक्षा
अशोक लेलैण्डको मेगा मनसुन फ्रि चेकअप क्याम्प
नक्कली हेलमेट टाउको र आँखाका लागि खतरनाक
महानगरले घटायो स्मार्ट पार्किङको शुल्क